သတင်း - သိမ်းသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတ
1. RFID ဆိုတာဘာလဲ။
RFID သည် Radio Frequency Identification ၏ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို inductive electronic chip သို့မဟုတ် proximity card၊ proximity card၊ non-contact card၊ electronic label၊ electronic barcode စသည်ဖြင့် ခေါ်ဆိုလေ့ရှိပါသည်။
ပြီးပြည့်စုံသော RFID စနစ်တွင် Reader နှင့် Transponder ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်၏ နိယာမမှာ Reader သည် အတွင်း ID ကုဒ်ကို ထုတ်ပေးရန်အတွက် Transponder ဆားကစ်အား မောင်းနှင်ရန်အတွက် Transponder သို့ တိကျသော အကန့်အသတ်မဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်းစွမ်းအင် ကြိမ်နှုန်းကို ပို့လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် Reader သည် ID ကိုလက်ခံရရှိသည် ။ ကုဒ်။ Transponder သည် ဘက်ထရီ၊ အဆက်အသွယ်များနှင့် ပွတ်ဆွဲကတ်များကို အသုံးမပြုသည့်အတွက် အထူးဖြစ်ပြီး ဖုန်များကို မကြောက်ဘဲ ချစ်ပ်စကားဝှက်ကို ကူးယူ၍မရသော ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ခုတည်းသော တစ်ခုတည်းသော လုံခြုံမှုရှိပြီး တာရှည်ခံပါသည်။
RFID တွင် အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာရှိသည်။ လက်ရှိတွင် ပုံမှန်အပလီကေးရှင်းများတွင် တိရိစ္ဆာန်ချစ်ပ်များ၊ ကားချပ်စ်ခိုးယူမှုဆန့်ကျင်သည့်ကိရိယာများ၊ ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်မှု၊ ကားရပ်နားရန်နေရာထိန်းချုပ်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ ပါဝင်သည်။ RFID တဂ် အမျိုးအစား နှစ်မျိုး ရှိသည်- အသက်ဝင်သော တဂ်များနှင့် passive တဂ်များ။
အောက်ဖော်ပြပါသည် အီလက်ထရွန်းနစ်တက်ဂ်၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်- ချစ်ပ် + အင်တင်နာနှင့် RFID စနစ်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ ဇယားကွက်
အီလက်ထရွန်းနစ်တက်ဂ်များကို ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းတက်ဂ်များနှင့် RFID တွင် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် ပစ်မှတ်အရာဝတ္တုများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့် ဆက်စပ်ဒေတာရယူရန် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများကို အသုံးပြုသည့် အဆက်အသွယ်မရှိသည့် အလိုအလျောက် သက်သေခံနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် လူသား၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမလိုအပ်ပါ။ ဘားကုဒ်များ၏ ကြိုးမဲ့ဗားရှင်းအနေဖြင့်၊ RFID နည်းပညာတွင် ရေစိုခံ၊ သံလိုက်ဓာတ်၊ မြင့်မားသော အပူချိန်၊ တာရှည်ခံမှု၊ တာရှည်စွာ ဖတ်ရှုနိုင်သည့် အကွာအဝေး၊ တံဆိပ်ပေါ်ရှိ ဒေတာကို ကုဒ်ဝှက်ထားနိုင်သည်၊ သိုလှောင်မှုဒေတာပမာဏ ပိုကြီးသည်၊ သိုလှောင်မှုအချက်အလက်ကို လွတ်လပ်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်နှင့် အခြားအားသာချက်များ .
3. RFID နည်းပညာဆိုတာ ဘာလဲ။
RFID ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်သည် ပစ်မှတ်အရာဝတ္တုကို အလိုအလျောက်သိရှိနိုင်ပြီး ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများမှတစ်ဆင့် ဆက်စပ်ဒေတာများကို ရယူပေးသည့် အဆက်အသွယ်မရှိသည့် အလိုအလျောက် သက်သေခံနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သက်သေခံခြင်းလုပ်ငန်းသည် လူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမလိုအပ်ဘဲ ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ RFID နည်းပညာသည် မြန်နှုန်းမြင့်ရွေ့လျားနေသော အရာဝတ္ထုများကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်ပြီး တက်ဂ်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖော်ထုတ်နိုင်ကာ လုပ်ဆောင်ချက် မြန်ဆန်အဆင်ပြေပါသည်။
တာတိုရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း ထုတ်ကုန်များသည် ဆီစွန်းထင်းမှုနှင့် ဖုန်မှုန့်များကဲ့သို့ ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကို မကြောက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စက်ရုံတစ်ခု၏စည်းဝေးပွဲလိုင်းပေါ်ရှိ အရာဝတ္ထုများကို ခြေရာခံရန် ယင်းကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဘားကုဒ်များကို အစားထိုးနိုင်သည်။ တာဝေးရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း ထုတ်ကုန်များကို ယာဉ်အသွားအလာတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး သတ်မှတ်အကွာအဝေးသည် အလိုအလျောက် ကောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ် သတ်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့ မီတာဆယ်ဂဏန်းအထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
4. RFID စနစ်၏ အခြေခံ အစိတ်အပိုင်းများကား အဘယ်နည်း။
အခြေခံအကျဆုံး RFID စနစ်တွင် အပိုင်းသုံးပိုင်း ပါဝင်ပါသည်။
Tag- ၎င်းကို ချိတ်ဆက်မှု အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ချစ်ပ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တဂ်တစ်ခုစီတွင် ထူးခြားသော အီလက်ထရွန်နစ်ကုဒ်တစ်ခု ပါရှိပြီး ပစ်မှတ်အရာဝတ္တုကို ဖော်ထုတ်ရန် အရာဝတ္တုတွင် တွဲထားသည်။ စာဖတ်သူ- တဂ်အချက်အလက်ကို ဖတ်ခြင်း (နှင့် တခါတရံရေးသည်) ကိရိယာ။ လက်ကိုင် သို့မဟုတ် ပုံသေပြုလုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
အင်တင်နာ- တဂ်နှင့်စာဖတ်သူအကြား ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်ပါ။